Vidin-tsolika : fampiharana ny vidiny tena izy | NewsMada
Vidin-tsolika : fampiharana ny vidiny tena izy
Nahitana fisondrotana vaovao indray ny vidin-tsolika nanomboka omaly. Fisondrotana niainga amin’ny kajy atao isam-bolana izy io, araka ny nifanarahana tamin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny FMI, noho ny fampiharana ny « tena vidiny ». Nanamafy izany ny filohan’ny fikambanana mpivarotra mpaninjara solika, Rakotozafy Martin. Tsy maintsy ampiharina io vidiny tena izy io hatramin’ny tsy nisian’ny fanampiana avy amin’ny fanjakana nanomboka ny taona 2015. Koa tao anatin’ny efa-bolana izany, nisondrotra 300 Ar araka ny salanisa ny vidin-tsolika rehetra.
Efa nisy fihaonan’ireo mpitantana kaompania mpivarotra solika tany Toamasina, araka ny fepetra napetraky ny Banky iraisam-pirenena sy ny FMI ihany, ny amin’ireo singa maro hoentina mikajy ny vidin-tsolika. Mifanaraka amin’izany ny mpandraharaha sy ny OMH ary atao isam-bolana ny kajy. Anisan’ny lehibe amin’izany singa izany ny vidin’ny dolara sy ny vidin’ny baril eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ho fantatra ihany koa fa kajy miainga avy amin’ny vidiny roa volana lasa eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, ny vidiny ankehitriny izao ho an’ny mpanjifa.
Amin’izao fiandohan’ny volana febroary izao, niakatra 160 Ar ny lasantsy, 3.720 Ar lasa 3.880 Ar ; gazoala, 3.150 Ar niakatra 3.270 Ar, nanantombo 120 Ar ; tsy niova kosa ny vidin’ny solika fandrehitra. Andrasana indray izany ny amin’ny fiandohan’ny volana manaraka : hiakatra sa hidina sa tsy hiova ? Ny fantatra aloha, raha tamin’izay roa volana lasa izay, tsy niova firy ny tsena iraisam-pirenena momba ny solika, toy izany koa ny vidin’ny dolara. Mitarika fiakaran’ny vidim-piainana hatrany anefa ny fiakaran’ny vidin-tsolika. « Koha-maina aza ataon’ny sasany, mainka fa misy hanilihana azy ».